David Wilkerson banyere okwukwe ije | Apg29
David Wilkerson banyere okwukwe ije
"A pastọ kwuru, Ọ na-arahụ nnọọ, na otu ụbọchị, onye okwuchukwu na-ebili ma na-ekwu, m natara a echiche site na Jehova, ọ bụ oge na-amalite na-efe Mary. Ọ ga-aga ebe."
"Nke a bụ otu nke kasị ukwuu humiliations of Jesus Christ na-eme ebe ọ bụ na Kraịst. Nke a Ẹyụrọde gospel na-nsí ichekwa - ọbụna China, Africa na gburugburu ụwa. Ọ bụ ihe na American gospel mepụtakwara na agbasa site ọgaranya American ozioma na ndi ozuzu aturu. Rich! "
Anyị na-ya ọzọ otú ị ghọtara ogo ma ọ bụrụ na i mebeghị otú ahụ. Enwere m ekele na Chineke na-zọpụta m site na ụgha echiche mkpọsa na m na-ekwupụtara ya ka mmehie ọ natara ozizi ụgha ahụ.
Ị mwute n'ihi ihe ya anya ka na Sweden taa n'etiti ndị Chineke? Ebee bụ okwu banyere owuwe nke Achọghị? Mgbe ụfọdụ, o yiri ka ọtụtụ ná ndị Kraịst ndị ọzọ na-elekwasị anya àmà na-egosi ndị a ma ama karịa na Jizọs ga-abịa azụ!
Ị dị njikere maka Jesus na-abịa? The okwu nke Cross, mgbe unu nụrụ ihe ọhụrụ, 1886?
Ugbu a ị ga-esi a obere ọgụgụ banyere David Wilkerson ihe o dere banyere okwukwe ije.
The ihere Assembly
The mbụ English aha -Ndị nkọcha nke nzukọ ukwu
site David Wilkerson
Zefanaya 3: 18- Ndị na-mwute maka ukwu ha ka m ga-akpọkọta, ndị na-gi, onye ibu nke mweda n'ala. (1917)
Nke a bụ a sọrọ amụma nke Zefanaya. Ha nwere na-eme na Israel ụmụ kamakwa Zaịọn ime mmụọ (nke bụ na chọọchị nke Jesus Christ n'oge ikpeazụ). Mbụ, o na-agwa ndị Juu - na Chineke ga-eme ka ọnụ na gbasasịa - ma ọ ga na-eweta azụ ndị nwere a gbajiri obi Israel nọ na ọnọdụ - ọ na-echeta ihe niile ndị buru ihere - niile egwu ihe wee na Chineke ụlọ. Iji ndị na-ebu ibu arọ, ọ sịrị; "M ga-achịkọta unu." O nyere ha oké nkwa
Amụma a na-kwara na chọọchị nke Jesus Christ ke mme akpatre usen. Na Old Testament, umu Israel a kpọrọ a oriri ruo ụbọchị asaa. N'ubọchi nke-asatọ - akpọ a nzukọ ukwu. Ọ bụ mgbe ahụ ha zukọrọ ọnụ - etinye ihe ọ bụla ọzọ e wezụga na-elekwasị anya na-efe ma na-eto Nna ha nke eluigwe. Akwụkwọ Nsọ sịrị: "N'ubọchi nke-asatọ i ga a nzukọ ukwu." Nke a oriri collection na-anọchi anya Old Testament, Chineke iche chọọchị kwesịrị izute Onyenwe.
Nke a bụ na chọọchị nke Jesus Christ ke mme akpatre usen. Dị ka Zefanaịa, ulo Chineke n'oge ikpeazụ ka ihere. Okwu Hibru a pụtara "ihere, ihere". Ọ ga-abụ ihe ihere na-adịghị asọpụrụ ulo Chineke. Anyị na-adịghị ekwu okwu banyere n'ezi ofufe dapụ, na-emesapụ aka oge a na chọọchị - Jehova na-ekwu na na na ụbọchị nke ikpé, Ọ ga-obibi na chọọchị. Anyị pụrụ ikpe ekpere maka ha, ma anyị ekwesịghị imefusị anya mmiri anyị na ya na-adịghị ata Assembly.
Chineke na-achọ a bụ ndị chọrọ iru uju na ịkwa ákwá maka ihere na-amalite Church of Jesus Christ n'ụbọchị ndị a. M na-ekwu banyere ụka na a mụrụ na Pentikọst. M na-ekwu banyere ụka na a mụrụ Pọl na ndịozi ahụ na nkuzi. The ọgbakọ na a mụrụ na eziokwu nke Jesus Christ ịchị. The mụrụ ọzọ ụka bụ n'okpuru agha. Assembly bụ ala.
Ọ na-e buru amụma na n'oge a nke ihere, ihere na infamy, Chineke ga-eme ka a dị nsọ ná ndị ga-eru uju ma kwaa ákwá a mmetọ - Chineke ga-a fọdụrụnụ agaghị anọdụ ịla site mgbe niile a bakpu Assembly. Chineke na-ekwu: "M ga-enwe a bụ ndị ga-abụ afọ ojuju ibi ndụ dị mma na-eleghara ndị quacks na ego na ewere ndị amụma ụgha na-abata n'ụlọ Chineke na-ebibi ihe niile."
Chineke ga-akpọkọta a ndị mmadụ na-eru uju ihe a - ma ọ bụrụ na ị na-hụrụ Onyenwe anyị n'anya ma n'anya Ya ụka, i nwere ike na-ele anya na ihe na-eme taa (na m ga-ekwu banyere ndị a humiliations site aha). Ọ bụrụ na mgbe na-anụ ihe m nwere ikwu banyere ihe ndị a humiliations, nwere ike na-eje ije ghara ịga chọọchị na-ekwu, "m jidesienụ ihe e dere na Matiu 18, ọnụ ụzọ ámá nke hell gaghi-eguzosi ike ruo Assembly, agaghị m enwe nchegbu banyere m, Chineke nwere ihe niile n'okpuru akara.
Ọ bụ ezughị. Chineke na-eji ndị mmadụ. Chineke na-eji ndị mmadụ ime ya ọrụ. Na ọ dịghị ezipụ ndị mmụọ ozi. Angels ákwá n'elu ya, ma Chineke anaghị eji ndị mmụọ ozi na imezu nzube ya. Ọ na-eji ndị ikom na ndị inyom na-agbajikwa obi na ibu -. Ikpe bụ n'ọnụ ụzọ, Jesus. Ụbọchị Jehova dị nso.
Eteta okenye. Eteta ozuzu aturu. Eteta ọzụzụ atụrụ.
Ele na chọọchị. Nweta rye. Eyi ya. N'ihi gịnị ka anyị na-na ibu arọ nke nzukọ ukwu ihere? Joel kwuru, sị, "n'ihi na a ọjọọ nkpuru e kụrụ.
A ozi ọma na-akawanye na ihe niile n'anya akpọnwụ. Ihe niile bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na Chineke na-agwaghị agwa akpọnwụ. The nkpuru ruttet- ndị mmadụ na-agụụ na-agụgbu na-anụ Chineke nke dị ọcha okwu ma na e nweghị ahịhịa. The ìgwè ehi hapụworo na agụụ na-agụ. The osimiri nkụ. A ọku ala ọzọ na-eripịarịta ndị pastọ. Ezekiel na-ekwu na Ndị Ọzụzụ Atụrụ na-azọda ndị ezi ubi ma rie ihe kasị mma maka onwe gị. Gịnị bụ ihe ndị kasị ihere ihe na-eme na Chọọchị nke Jizọs Kraịst taa?
Nke a bụ otu nke kasị ukwuu humiliations of Jesus Christ na-eme kemgbe Christ. Nke a Ẹyụrọde gospel na-nsí ichekwa - ọbụna China, Africa na gburugburu ụwa. Ọ bụ ihe na American gospel mepụtakwara na agbasa site ọgaranya American ozioma na ndi ozuzu aturu. Bara ọgaranya!
Ọ na-eme m ekporopụ anya na ọtụtụ mmadụ nwere ike ịnụ na ìgwè ndị agha na-ahụ videos na-esi n'ime ndị a ọganihu nzukọ enweghị ákwá n'elu ha. Nke a nsi agbasawo n'ụwa nile. Cuba bụ banyere-emeghe, na ha ọkụ n'obi ka ha ga-esi na na otu oge ha na ihe ịga nke ọma na gospel na-agwa ha, "ị na-ogbenye n'ihi ogologo oge, Chineke chọrọ niile Cuba kwesịrị ọgaranya."
Nke a izu m natara a video teepu na e dere na Kenneth Copeland si ọmụmụ ihe. M na-ege ọkà okwu na ghọrọ nyeghị ya ọnụ okwu. Friends agụ New Testament, ị ga-ahụ na Pọl onyeozi kwuru na ndị ha kweere bụ ndịozi ụgha. Ọ dọrọ aka ná ntị na ọ na-akpọ ha aha ha. M na-agwa gị na ọ bụrụ na ị na-ege ntị ihe m asị gị, ma na-eru újú, mgbe ahụ, ị ​​na-ìsì. Ị bụ ndị kpuru ìsì. Ị nwere ike obi. A obi a ike agha gburugburu ya na ọcha gospel ike banye n'ime ya. I nnọọ jupụta na a ekwesịghị gospel na ị bụghị ke nri gị n'obi. Ị gaghị na-ekwusa eziokwu. I nwere ike na-egosi ha ihe ọ bụla e dere ede n'ihi na ha nwere ihe-agha n'elu ha n'obi. Ike obi.
Ụfọdụ n'ime unu agaghị enweta ya. Ọ bụrụ na ị banyere mkpụrụ obi gị na Copeland ma ọ bụ Hagin si etere, ị ga-amasị ihe ị na-anụ. Enyi, m onye ọzụzụ atụrụ, m na-akpọ ya Chineke. Enyewo m nke a na chọọchị a nkwa. Dị ka ogologo oge dị ka anyị na-eguzo na a n'ebe ikpo okwu, anyị hụrụ anụ ọhịa wolf na atụrụ si uwe ndị bịara ohi ìgwè atụrụ, anyị kwesịrị-ebili ma na-eti mkpu. Ọ dị gị ime ihe banyere ya. M nọdụrụ n'izu a ma gee ntị a ọkà okwu na a ogbako na m ndịghe na-afụ ụfụ. A onyenwe nsogbu wee m. Ọ bụ ya mere m na-ekwusa ozi a. -Eru uju n'elu ya.
M aguputa okwu maka okwu ihe e kwuru. Ndị ọkà okwu nwere ike na o siri ike na-ekwu okwu okokụre n'ihi na nke ndị niile bịara wee na-etinye ego ha akpa. Ihe kpatara ha na-eme na bụ ozizi ọhụrụ a na-abịa ma na-asị, "ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gọzie, otú ị chọrọ ịhụ kasị gọzie agọzi nkwusa ozioma ma ọ bụ pastọ i nwere ike ịhụ n'ihi na o nwere ọtụtụ ihe ga-esi ọtụtụ nke na-enye obere, ọbụna ihe o nwere ka agānapu ya. Ọ bụrụ na ị na-ahụ kasị gọzie agọzi ịga nke ọma na-ekwusa na-enye ya ego, ị ga-gọziri agọzi. The ngọzi ọ bụ, ọ bụrụ na ị na-enye ndị na-kasị gọzie agọzi - "ọ bụ dị ka a pyramid atụmatụ. Ọ bụrụ na ndị ikom ndị a na ụwa, ha ga-ejedebe na nga. Pyramid atụmatụ. Onye n'elu na onye o yiri ka ihe kasị nsọ, na onye gwara loudest. Ọtụtụ narị ndị mmadụ wee ruo mgbe akpa na-stuffed. Mmehie na-ekwu, "nke a bụ a free gospel? Banknotes? "
Gee ntị n'ihe e kwuru. Ọkà okwu ahụ wee bilie, si, banyere a di ya nwụrụ na-anata na-elekọta mmadụ aka na-enye gị 5 dollars, otú ị ga-ewe ya, Elaija we kuru nwaanyị ikpeazụ nri. Ị na-ndị e tere mmanụ, ị kwesịrị ya, were ya. "Otu ọkà okwu kwuru," m na-ebi a 1,000 square ụkwụ ụlọ. M ga-ewu a ibu ugbu a. One na King Solomon ga-mpako nke. M na-akwụ ụgwọ dị nnọọ 15,000 US dollar a nkịta. Ị na-ahụ ihe ndị dị ebube mgbanaka na mkpịsị aka m, m na nso nso na Jamaica na akwụ ụgwọ 32,000 US dollar ya. Achọrọ m ka unu mara na mgbe ndị mmadụ na ebe m dị ndụ na-agba ọsọ gara aga m mansion na-ahụ m apụta-Royce na driveway, ya mere ha maara na e nwere a Chineke n'eluigwe. "
Gwa m, bụ gospel? Gwa m, na-akwa ákwá adịghị n'elu ya?
Otu n'ime ndị ọkà okwu we bilie, si, "Anyị mere a na ọgbụgba ndụ na Nwanna Copeland na n'elu ọzọ afọ, ọ dịghị onye n'ime anyị na-ata ahụhụ a otu ụbọchị. Anyị ekwesịghị iwere a oge nke nkụda mmụọ. Anyị ga na-arịa ọrịa ma ọ bụ mkpa ihe. Anyị kwesịrị-enwe niile ngọzi. Anyị na-ajụ ihe niile na-ata ahụhụ, ihe mgbu, ihe niile ahụ na ego nsogbu. " ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ na top.
Nke a ihe ofụhọ m kasị. Nke a na e kwusara ozi ọma. "Mmụọ Nsọ na-apụghị wụsara gị ruo mgbe ị na-ego eruba. Tupu ị na-aga nke ọma nwere ike nke Mmụọ Nsọ na-adịghị eme ihe ọ bụla. "
Chee echiche banyere ya! Olee otú nke a si emetụta gị? Gịnị na-eme ya na gị mmụọ mgbe ị na-ahụ ndị ogbenye na-ebi ndụ site n'aka ọnụ, na mberede, ọ na-ekwu, "na-achọ ego" na ndị mmadụ na-agba ọsọ dị ka crazy na mgbe ha na-agba ọsọ, ha na-ekwu na anyị "na anyị na-ekwu na akụ na ụba."
Mgbe ahụ m na-ahụ ndị mmadụ iri ari ka agwọ nke ha oche na na na n'ala. M anya ọkwọrọikọ ebili ma na ọsọ ka a agwọ na ndị mmadụ na-ada ebe nile. Enyi, ihe na-aga?
Mweda n'ala nke högtidsförsamligen! Onye Amụma a na-akpọ ha "ndị anyaukwu nkịta,-adịghị asọpụrụ Chineke-nche". Enyi, ọ bụrụ na i nwere obi nke Chineke na nke Onyenwe anyị na-ata ahụhụ ị ga-eti mkpu, na Aịsaịa, ha na-ìsì nche, amaghị, ndị ogbi nkịta, na-ehi ụra, na-ahụ n'anya na-ehi ụra, ndị anyaukwu nkịta nke nwere ike mgbe ezuru.
"M nwere 1,000 square mita ma m ga-ere ya, na m ga-ewu ụlọ na King Solomon ike ibi i ihe ah u" Iji mgbe na-ezu. O kwuru, sị, "ndị ọzụzụ atụrụ na-apụghị ịghọta, onye ọ bụla na-achọ ya, ọ bụla iji nweta ha onwe ha mkpa zutere. Jeremiah chebere okwu ọ bụla. O kwuru, sị, "My ndị mmadụ dị ka atụrụ furu efu. Ha azụ atụrụ emewo ka ha kpafuo. "Ị na-asị," Pastor, ị na-enweghị ikike na-ekwu okwu otú ike banyere nke a. "Ọ bụrụ na ị na-eche na m na nkọ, mgbe ahụ na-agụ Ezekiel 34: 1-10.
Ị na-ewe 50 nde site na nwaanyị a na aka ekedep a nkịta maka SEK 150 000. Ị na-ewe lara ezumike nká na nwaanyị a na ndị ogbenye, na ị na-agwa ha na ha na-enweghị okwukwe - n'ihi na ha na-adịghị aga nke ọma. Ị na-ewe aji ìgwè ewu na aturu. Ị na-adịghị na-achọ mkpụrụ obi, na-achọ ego. "Ndị ọzụzụ atụrụ fatten onwe ha na bụghị ìgwè atụrụ, ya mere, unu ndị ọzụzụ atụrụ, nụrụnụ okwu Jehova. Otú a ka Jehova bụ Chineke gị, na-ahụ m na-emegide ndị ọzụzụ atụrụ, na m ga-akwụ ìgwè atụrụ si n'aka-ha, ma ha ga-akwụsị na-eri nri na ìgwè ehi. Ha ekwesịghịkwa fatten onwe ha ọzọ, n'ihi na m ga-anapụta ìgwè atụrụ n'ọnụ ha, ha ga-agakwaghị enwe n'anụ ahụ ha. "
M ga-ewepụ ndị ìgwè ndị ikom ndị a ezé. Chineke nyere anyị aka.
Nke abuo, ezighị na nke a gọziri agọzi na Mmụọ Nsọ. Nke a bụ ihe kasị njọ mmechuihu. Ọ ga-eme ka anyị na-ada anyị ihu. Ụzọ nke Mmụọ Nsọ ga-ekpu ka ụwa dum.
Ọ dị mwute ịhụ na e nwere otú obere nghọta ekpe na chọọchị na n'etiti ọtụtụ ndi ozuzu aturu na ndị ndú chọọchị. Ha adịghị ama ọbụna mgbe Mmụọ Nsọ na-ekpu ma ọ bụ na-ekwulu. E nwere ọtụtụ puku Ndị Kraịst na-aga na-revival mkpọsa na-ahụ ihe na ha kweere na-abịa site na Mọ Nsọ, ma ha amaghị ihe ha na-enweta n'ịnara ihe. Ha akụkwa aka ha na-eto Chineke mgbe a nwoke guzo n'elu ikpo okwu na ikwulu na misrepresenting Mmụọ Nsọ, ha na-amaghị banyere ya.
Dum adọrọ adọrọ iche, gụnyere American Pentikọstal ije, tisasịrị ụgha revivals. All ụdị na-eme - ihe ọhụrụ ọ fọrọ nke nta ọ bụla izu. The isi amaghị ma makụọ ma ọ bụ kọchaa ya. Ha na-amaghị ihe na-eme. Anyị na-enweta akwụkwọ ozi site n'aka ọtụtụ narị ozuzu aturu si gburugburu ụwa. Ha na-ajụ. "Gịnị bụ ezi ihe na ihe ọjọọ?" Olee ebe ndị isi? Ebe bụ onye nwere ike iduzi anyị?.
Enyi, ihe anyị na-ahụ na-eme taa na ihe a na-akpọ revivals na ihe na-eme na Mmụọ Nsọ, anyị nwere ike ịhụ ihe ndabere maka edemede. Ihe ọ bụla nke anyị na-apụghị ahụ na Akwụkwọ Nsọ na-aghaghị ịjụ. Kpamkpam jụrụ!
M na-eti m na-ahụ ndị a videos na ndị mmadụ na-na-ezitere m si gafee mba. Dum ọgbakọ ike, na-ada n'ala, na-achị ọchị hysterically, ebu gburugburu dị ka ndị aṅụrụma, na-agbagọ dị ka agwọ, anụmanụ na-agbọ dị ka anụ ọhịa. Anyị nwere ozioma na-eguzo ruo na ahuwo Nnam na ndị mmadụ na-esi na ha na-ada, dị ka ma ọ bụrụ na Mmụọ Nsọ na-gụnyere ya. Nkedo ya ika jaket na ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ "Chineke ubọk."
A ọhụrụ gospel ka abịa America. Enyi, ọ bụ ike ike na ndu, ma m na-agwa gị. Mgbe ị na-ahapụ Okwu oke, mgbe ị na-asị: "Ihe a bụ ihe ọhụrụ, Chineke na-eme ihe ọhụrụ? M na-adịghị aghọta ya, ọ bụghị nke e dere ede, ma anaghị m chọrọ iguzogide na Mmụọ Nsọ. "
Enyi, ọ bụrụ na ọ bụghị na Bible, anyị aghaghị iguzogide ya. The ọhụrụ bụ na ị pụghị ịbanye n'alaeze Chineke ma ọ bụrụ na ị na-amasị a obere nwa. People abịa yi ákwà nhicha mere na ha nwere ike ime ka ha mkpa ha n'oge ọmụmụ ihe. Ọ bụ ọhụrụ. Enyi, ebe ọ ga-akwụsị?
A pastọ sịrị: "Ọ na-arahụ nnọọ, na otu ụbọchị, onye okwuchukwu na-ebili ma na-ekwu, m natara a echiche site na Jehova, ọ bụ oge na-amalite na-efe Mary." Ọ ga-aga ebe.
Ọzọ okwuchukwu kpọrọ onwe ya na Mọ Nsọ ore mmanya. Ọ na-ekwu, "Bịanụ ná mmanya na ihe ọṅụṅụ nke Mmụọ Nsọ." Ha na-akpọ ya ihe ọṅụṅụ nke mmanya ọhụrụ. M na-anụ onye amụma ahụ kwuru ada m ná ntị, "ụbọchị Onyenwe anyị bụ ebe a, ọjọọ jupụta, kwala ákwá n'etiti ogige na ebe ịchụàjà. Na-etinye na nchupu uwe. Ofu na-eru uju maka ndị dara ndị mmadụ. "
Jizọs ga-abịa. The pụta ka unreached. Mgbe m na-ahụ Ndị Kraịst gaa ihe ha na-akpọ Mmụọ Nsọ mmanya, ebu dị ka otu onye aṅụrụma, ga Joel gwara m n'ụzọ doro anya, "na-eteta, na ị ṅụbiga mmanya ókè, na-akwa ákwá, unu niile ndị na-aṅụ mmanya ọhụrụ n'ihi na ihe ubi ubi na-ala n'iyi."
Mkpụrụ Obi puku na-anwụ, otú ahụ, ihe ị na-achị ọchị na? Na Mmụọ Nsọ ga-arụ ọrụ n'ebe nile n'ụwa. Ị ga-enwe ike were ya na-kasị ọnụ ntụ na ọjọọ ebe. Ị ga-enwe ike iji ya ndị ogbenye mba. Ị ga-ewere ya ka ihe doro edo nke ndi mmadu, na ọ ga na-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ naanị na ndị ọgaranya America. Ọ ga-arụ ọrụ n'ebe nile n'ụwa.
M aka ndị a ndị mmadụ na-ha na-achị ọchị gospel n'ime Balkans now. Gaa oso n'ogige ebe ndị inyom na-akwa ákwá n'ihi ha ndị ikom a gbara. Ha ndị inyom e n'ike. Ha na ụmụ ha na-anọ agụụ. Ha tụfuru ha n'ebe obibi ha, ya mere, gwa ha ka ha gaa na mmanya - The Holy Spirit chọrọ ka ha na-achị ọchị. Nke a na-akpọ revival abịa Madison Square Garden a n'oge okpomọkụ. Ọ bụrụ na i nwere ike script, ị na-ebu ibu arọ nke nzukọ ukwu, olee otú ị ga-adị njikere iji ndị dị otú ahụ a ozizi.
Ka m kọọrọ gị onye na-achị ọchị. World. The-adịghị asọpụrụ Chineke mba ọzọ. Ọ na-a ntem. Na a oge nso ọbịbịa nke Christ mgbe chọọchị nke Jesus Christ ga-tọrọ atọ na nzuzo kaboodu ekpere. Mgbe na-akwa ákwá nke furu efu. Mgbe ọ ga-enwe ọchịchọ ahapụ niile na-eso Jizọs. Mgbe mgbe ndị dollar ụgwọ ga-kwuru. The American chi. The American avgudadyrkandet. World na-ekiri ara a na ị maara ihe ha na-eche - na Mmụọ Nsọ bụ a ringmaster. Ọ bụ a adọrọ adọrọ ọgbọ egwuregwu.
M ịma ihe ndị mmadụ na-eche ọzọ. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-achọghị ala ọzọ. M na-eche banyere mkpụrụ obi ha na eziokwu na ọtụtụ na-kpuo ìsì. M nwere ibu ọrụ n'ihu Chineke iguzo n'iru nzukọ na O na-akpọ m na-eje ozi, ma na aka na ị na-ekwu na ndị a Ita-uta na ukwu na chọọchị, na Bible na-ekwu na ị ga-eru uju n'elu ya. Ndị okenye ga-enye. The chọọchị, pastọ, ndị na-ejere, na ozioma. Anyị kwesịrị ikpe ekpere ala ndị a ewusiri ike.
N'ikpeazụ, a na-akọcha nke ewetu Assembly demoralization. Ahụhụ ga-adịrị ndị na-akpọku ọjọ ezi na ezi ọjọ - na na-akpọ ọchịchịrị maka ìhè, na ìhè maka ọchịchịrị. Na-eme ka ọ dị ilu ụtọ na-atọ ụtọ ilu. (Jer 23:15). Ahụwo m egwu ihe na ndị amụma. Ha na-akwa iko, ha na-eje ije n'okwu ụgha, ndị na-egosi ajọ aka na ọ dịghị lọta ọjọọ.
M nwetara akwụkwọ ozi nke a izu si a oké iwe Christian nwaanyị. O kwuru, sị, "Di m, bụ kpọrọ onwe ya a Christian, bụ oké player, ọ na-arụ n'ihi na ọtụtụ nde." O kwuru, sị, "M na na na otú nchegbu banyere ihe ize ndụ na ụlọ ọrụ na o nwere." Echere m na, "m na-arịọ ya ka o na-aga pastọ."
O kwuru, sị, "ka Nwanna Wilkerson, ị na-amaghị ihe mere m, m ka iwe, na-afụ ụfụ na mgbagwoju anya. M zitere anyị multi-nde ịgba chaa chaa na di anyị pastọ. "
O kwuru, sị, "m chọọ bụ na Akwụkwọ Nsọ si 1 Genesis ka Mkpughe, na m nwere ike ịhụ ihe ọ bụla na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu okwu megide ịgba chaa chaa. M na-ahụ ọ dịghị mmehie dị n'ime ya, ya mere, nwere fun. "Ọ bụ idem ama akpa," olee otú a onye nke Chineke na-ekwu ihe dị otú ahụ di m? "
Nke a bụ kpọmkwem ihe Jeremaya kwuru, "ozuzu aturu egosi eme ihe ọjọọ aka na ọ dịghị onye hapụ ajọ omume ya." Ọ na-akọwa ihe mere ha ledara Assembly demoralization na ihe mere ha na-akpọ ihe ọjọ ezi na ezi ihe ọjọọ na-elu ilu na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ ilu.
O kwuru, sị, "Amụma akwawo iko, na-eje ije na okwu ụgha." Onye ọ bụla nwere mmehie ná ndụ ya agaghị ebili ma na-ekwu okwu banyere mmehie ahụ. Ọ kwenyere nke ya onwe ya na-akwa iko, ya onwe ya mmehie na ya n'uche ojo.
M na-adịghị ise ọ bụla ohu obodo a ihe karịrị a mbo. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ejere ọkụ maka Chineke. E nwere eto eto na-na-ọcha na ihe ọjọ a afọ. M zutere ọtụtụ n'ime ha na m na-ekele Chineke maka ha. Ọbụna n'obodo a, m zutere ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ezi omume nkwusa m zutere na ndụ m nile.
Ọtụtụ ndị ohu m na-eche a dị mwute na ha na-eche olu ndị pụrụ igosi ihe ọjọọ. "Ọ bụrụ na ha guzoro n'etiti ndị m n'ụlọikpe na nwetara m ka ndị mmadụ nụ okwu m - ma ọ bụrụ na ha kwuru ihe dị m n'obi. Ọ bụrụ na ha kwuru si n'uche Chineke, ha ga-emewo ndị mmadụ n'ebe ha ụzọ ọjọọ na omume ọjọọ ha. "
Ị pụrụ ịhụ na ọ bụrụ na a onye ahụ makwa na Jehova Chineke na-ekwu banyere ndị ọzọ, "na edunyeghị m ha, m na-gwara ha, ha na-ekwu si ha onwe ha pụrụ ichetụ n'echiche. Ọ nke ihe ọjọ n'obi-ha.
"Ha na-ekwu ọhụụ site n'obi ha, ọ bụghị m dunyere ha. M gwara ha. Ha na-agwa ndị na-eleda m, 'Jehova we si, I ga-enwe udo,' na ha na-agwa onye ọ bụla na-ejegharị mgbe obi ya na ya onwe ya echiche efu 'ihe ọjọ ọ ga-abịakwasị unu.' " The nkọcha na nzukọ ukwu ga-abụ onye kasị ukwuu mwute n'ihi na ndị niile na-n'anya Kraịst na Church. Nke a ga-abụ onye kasị ukwuu mwute n'obi ha - ita-uta nke aha ya na ọgbakọ ya. Ákwá n'elu ala Assembly. Mgbe ị na-ewere nguzo ha, na mgbe ị na-Onyenwe unu ibu arọ, site n'ekpere na-ebu ọnụ. Nwa ọ bụla nke Chineke kwesịrị ikpe ekpere na ndị niile na-na-na-ejide a na-tọhapụrụ. Adịghị emetụ ya, adịghị aga nso ya, ma ọ bụrụ na ị na-aga ebe ahụ n'ihi ọchịchọ ịmata, ọ ga ị ma n'ọnyà ya arịọ ndị ha na ihe niile dị nke anụ ahụ.
Ruo mgbe ị maara otú obibi gị anụ na Mmụọ Nsọ, ya mere, na-anọ n'ebe ya. Jeremaya kwuru, "ka Jehova bụ Chineke gị n'etiti unu dị ike. Ọ ga-azọpụta, ọ ga-aṅụrị ọṅụ n'ihi unu na-abụ abụ. Ọ ga-ezu ike ịhụnanya ya. Ọ ga-aṅụrị ọṅụ n'ihi gị na-abụ abụ. "
N'ihi gịnị? N'ihi na ọ chọpụtawo a ndị mmadụ na-eru uju ihe ofụhọ ka obi-ya. -Eburịta ibu arọ ọ na-arụ, ita-uta nke iwu township.
Nke a ga-a "ịhụnanya ọnyà". Ị ga-anụ. "Anyị hụrụ onye ọ bụla. Ọ dịghị mkpa bụ ihe ị na-ekwusa ozi ọma. Ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-aga nke ọma. Ọ dịghị mkpa bụ ihe gị gospel bụ - ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ka anyị nye onye ọ bụla ọzọ a nnukwu mmakụ. "Olee otú abụọ na-eje ije ọnụ n'anabataghị. Olee otú ị pụrụ ije ije na ya na ị na-ekweta na, nke bụ unbiblical àgwà, ị nwere ike ọ bụghị. Ọ bụ a ịhụnanya ọnyà. Ha na-ekwu, "adịghị ekpe ikpe onye ọ bụla."
Nke ahụ abụghị ihe Bible na-ekwu. Ọ na-ekwu na anyị ga-ekpe ikpe ikpe ezi omume. Nkọcha na baara na ndidi. Adịghị m guzo na a ncha efere, m na-guzo a oké nkume. Chineke na-agbalị na-azọpụta gị, Ward.
Gịnị bụ Chineke akụ na Jizọs Kraịst? Udo nke Chineke, amamihe Chineke, Kraịst ya, ihe niile dị na Kraịst bụ nke anyị.
Enyi, kpachara anya! Lezie!
M egwu gị? Ị dị njikere na-na-ebu ibu nke Chineke. Ị gaghị eme ya na gị onwe gị na anụ ahụ. Tụgharịa onwe gị na Chineke.
The oge ẹkedikot a nzukọ ukwu. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla nke ndị a tepụ ma ọ bụ akwụkwọ, na-atụba ha nke ụlọ gị. Enyela ha, sure ha. Ọ bụrụ na mmadụ na-agwa gị ka i sonyere nzukọ ndị a, mgbe ahụ, sị, "Ewela iwe, m na-achọghị ka agụụ nke okwu na achọghị m ka obi m nkụ na-akpọnwụ. Achọrọ m dị ọcha okwu site na Jehova na-ekwe ka m na-eto eto. Achọghị m ihe ọ bụla ozi na-arịọ ndị ha na anụ ahụ m, ma ọ bụ na ike anyaukwu na obi m. "
Chineke na-enye na ihe dị anyị mkpa na ọ na-eme ihe ebube, ma ọ na ya onwe ya ụzọ. Ọ bụghị site misappropriating na misusing Akwụkwọ Nsọ.
Abraham na-achọ ndị na nzuzo, o leliri anya maka a obodo na e wuru na Chineke kere.
Nke a bụ a na-agụ email. Ede akwụkwọ si na uche bụ ha onwe ha na ọ bụchaghị ihe Apg29 pụtara.